China Best Price New box Transformer Professional Transformers Box Set လက်ကားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများ | Shengte
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းသေတ္တာအသစ် Transformer Professional Transformers Box Set လက်ကား
A. အရွယ်အစားသေးငယ်၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြည်တွင်းဥရောပအကွက်၏တူညီသောစွမ်းရည် ၁/၃-၁/၅ ခန့်သာရှိသောဧရိယာကိုအပြည့်အ ၀ ချိတ်ပိတ်၊ အပြည့်အ ၀ ကာကွယ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အကာအကွယ်အကွာအဝေးမရှိ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသော Transformer စွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ နိမ့်ကျခြင်း။
B. ဆူညံသံအနိမ့်နှင့်အားအပြည့်တင်နိုင်သောစွမ်းရည်နှင့်အမျိုးအစား S11 Transformer ထုတ်ကုန်ကိုအဓိကဗို့အားမြင့်အခန်း၊ ဗို့အားနိမ့်အခန်းနှင့် Transformer ဟူ၍ သုံးပိုင်းခွဲထားသည်။ ၎င်းကိုများသောအားဖြင့် "ထုတ်ကုန်" အမျိုးအစားဖြင့်စီစဉ်သည်။ ဗို့အားမြင့်ဘက်ကို loop network နှင့် terminal တွင် V-type သို့မဟုတ် T-type load switch နှင့် two-stage ဖျူးကာကွယ်မှုတို့ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးစနစ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်သည်။
C. ဖိအားမြင့်အခန်းအား oil-wet meter, oil signal meter, pressure gauge, pressure release valve, oil discharge valve နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ထားပြီး transformer ၏လည်ပတ်မှုကိုစောင့်ကြည့်သည်။
D. high-voltage feeder သည် cable plug ကိုသုံးကာအမျိုးမျိုးသော voltage နိမ့်ကျက်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် zinc oxide arrester ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ Low-voltage metering and shunting ကိုသုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်အရထည့်နိုင်သည်။
E. Transformer သည်အပူဖြန့်ကျက်ရန် corrugated fins များကိုသုံးသည်။ အထူးဖြစ်စဉ်ကုသမှုအပြီးတွင်၎င်းသည်ခိုင်မာသောသံချေးနှိမ်နင်းနိုင်စွမ်းနှင့်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်တည်ဆောက်ပုံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သာမန်သံမဏိပြားနှင့်သံမဏိသံမဏိပြားတို့ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပေါင်းစပ် Transformer (အမေရိကန် Box Transformer)
မော်ဒယ် အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်စွမ်း (KVA) ဗို့အားပေါင်းစပ်အကွာအဝေး ဆက်သွယ်မှုအုပ်စုနံပါတ် ဝန်တင်ဆုံးရှုံးမှု (w) ဝန်ဆုံးရှုံးမှု (W) ဖွင့်မရသောလက်ရှိ (%) short circuit impedance (ရာခိုင်နှုန်း) အကြမ်းဖျင်းအရွယ်အစား
ဗို့အားမြင့် (ကေဗွီ) ဖြန့်ဝေမှုအပိုင်း (%) ဗို့အားနိမ့် (ကေဗွီ) အလျား * အကျယ် * အမြင့် (မီလီမီတာ)
ZGS11-100 100 ၀.၄ 200 ၁၅၈၀/၁၅၀၀ ၁.၈4၁၁၈၃၀x၁၃၅၅x၁၇၃၅
ZGS11-125 125 240 ၁၈၉၀/၁၈၀၀ ၁.၇ ၁၈၃၀x၁၃၆၅x၁၇၃၅
ZGS11-160 160 270 ၂၃၁၀/၂၂၀၀ ၁.၆ ၁၈၃၀x၁၃၇၅x၁၇၃၅
ZGS11-200 2006340 ၂၇၃၀/၂၆၀၀ ၁.၅ ၁၈၃၀x၁၃၇၅x၁၇၃၅
ZGS11-250 250 ၆.၃ ± ၅ 400 ၃၂၀၀/၃၀၅၀ ၁.၄ ၁၈၃၀x၁၄၀၅x၁၇၃၅
ZGS11-315 315 ၆.၆ ±2× 2.5 Yyn0 480 ၃၈၃၀/၃၆၅၀ ၁.၄ ၁၈၃၀x၁၄၂၅x၁၇၃၅
ZGS11-400 400 10 Dyn11 570 ၄၅၂၀/၄၃၀၀ ၁.၃ ၁၈၃၀x၁၄၃၅x၁၈၀၅
ZGS11-500 500 ၁၀.၅ 680 ၅၄၁၀/၅၁၅၀ ၁.၂ ၁၈၃၀x၁၄၄၅x၁၈၆၀
ZGS11-630 630 11 810 6200 ၁.၁ ၄.၅ ၁၈၃၀x၁၄၄၅x၁၈၆၀
ZGS11-800 800 980 7500 1 ၁၈၃၀x၁၄၉၀x၁၈၆၀
ZGS11-1000 1000 1150 10300 1 ၁၈၃၀x၁၆၇၅x၂၀၀၅
ZGS11-1250 1250 1360 12000 ၀.၉ ၂၁၀၀x၁၈၄၅x၂၀၃၅
ZGS11-1600 1600 1640 14500 ၀.၈ ၂၁၀၀x၁၈၈၅x၂၁၃၅
မှတ်ချက်။ ကုန်ပစ္စည်းပုံသဏ္န်၊ အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်တို့သည်ဒီဇိုင်းတိုးတက်မှုများကြောင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
ယခင်: 100% Original အခြောက်အမျိုးအစား Pad တပ်ဆင်ထားသော Transformer
နောက်တစ်ခု: အကောင်းဆုံး KYN28A-12 Indoor Metal Armored Pull-out Switchgear ထုတ်လုပ်သူ
OEM ပေါင်းစပ် Transformer လျှပ်စစ်သေတ္တာအမျိုးအစား Tr ...